netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:Kubiss
Ks US Dollar
အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး
AMOROUS UP TO 80%
HP & ACER & MSI ( MUST BUY )
Acer Winter Sales
Happy Tazaungding HP (End User Promotion)
ကြည့်ချင်သောviewကိုရွေးပါ>> ဇယားဖြင့်ကြည့်မည် တကြောင်းချင်းစီကြည့်မည်
ရွေးချယ်ပြီးစိတ်ကြိုက်စီပါ>> Created on Name: A to Z Name: Z to A Price: Low to High Price: High to Low Position
တမျက်နှာလျှင်918 27 36 ခုစီကြည့်ရှုရန်
Kubiss Trio Eye Shadow
-အရောင်ထွက်အားကောင်းပြီး အမှုန့်များ ဖွာထွက်ခြင်း လုံးဝမရှိပါ ။ ပြေပြစ်ညီညာပြီး နူးညံ့စွာလင်းလက်လှပမှု ၊ colour tone များဖြင့် နက်ရှိုင်းစွာညှို့ငင်နိုင်မှု အမျိုးမျိုးသော မျက်ဝန်းပန်းချီလေးတွေကို ပုံဖေါ်လှပစေနိုင်တဲ့ အရောင်အတွဲအစပ် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မျက်ဝန်းလေးတွေကို လင်းလက်တောက်ပတဲ့ပြည့်စုံမှုကိုရရှိစေဖို့ hight light ပါဝင်တွဲစပ်ပေးထားပြီးဖြစ်တာကြောင့် တစ်ဗူးထဲနဲ့တင် သင့်ရဲ့မျက်ဝန်းအလှကို ပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးခြယ်မှုန်းနိုင်ပါသည်။
Kubiss Matt Natural Foundation
-အဆီပြန်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး တနေကုန် အလှမပျက် ကြည်စင်တဲ့အသားရေ LOOK ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ Kubiss ရဲ့ Natural Matt Foundation က အဆီပြန်ခြင်း ကို 80 % ထိ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်သလို Vitamin E ကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထားလို့ အသားအရေကို စိုပြည်တင်းရင်းစေပြီး အမဲစက်တွေကိုလည်း လျှော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။
-Suncream ပါဝင်တာကြောင့် နေလောင်ခြင်းကင်းဝေးကာ အဆီပြန်ခြင်းမရှိ သဘာဝအလှတရားကို ရရှိစေပါသည်။
Kubiss Loose Powder Code:KB6690
-အဆီပြန်တာကို တစ်နေ့တာလုံးထိန်းပေးပြီး ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကို ဖုံးကွယ်ပေးထားနိုင်သလို MAKE UP ကွက်တာ ပြာတာမျိုးကို မဖြစ်စေဘဲ လှပနေစေမည့် KUBISS LOOSE POWDER လေးမှာဆိုရင် Vitamin E နှင့် CALCIUM ဓာတ်အဓိကပါဝင်တာကြောင့် မျက်နှာအရေပြားအတွင်းပိုင်းသွေးကြောလေးတွေကို အားဖြည့်ပေးသောကြောင့် CELL သေတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး CELL သစ်များကိုတစ်ဖန်မွေးဖွားပေးနိုင်ပါတယ် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုနှေးကွေးစေကာ အသားအရေကိုကြည်လင်စေပါတယ်…..
-မျက်ကွင်းညို လို့၊ နှုတ်ခမ်းသားတွေ မဲနေလို့၊ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးရင် ကြာရှည်မခံလို့ ၊ မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိတ် ၊ မှဲ့ခြောက်တွေ ၊ အမာရွတ်တွေ ကို ဖုံးအုပ်ဖို့အတွက် Concealer ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
-တင်းတိတ် ၊ မဲ့ခြောက် ၊ အမဲစက်လေး တွေ ကို အရေပြားအတွင်းပိုင်းလွှာထိ ပြုပြင် ကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ Alight Weight Formula နှင့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် Skin Tone လေး ညီညာစေပြီး အပြစ် အနာအဆာကင်းတဲ့ အလှတရားကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ
-England နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ပြီး Vitamin E ကို အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အသားအရေကိုလဲ ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။မိတ်ကပ်သားထူပြီး Coverage ကောင်းကောင်းပေးနိုင်လို့ မိမိ ဖုံးအုပ်လိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိထိရောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Tube တောင့် ရော Liquid ရော အဆင်ပြေတာကိုရွေးချယ် ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
-QUAILITY ကတော့ LODON ဆိုတော့ လုံးဝ စိတ်ချရပါတယ် ( ENGLAND GMP ISO လက်မှတ် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ FDA လက်မှတ်လဲ ရထားပါတယ်
Kubiss Glimmer Glow
-Kubiss glow တခုရှိရုံဖြင့် ပါးနီကို တစ်ဆင့်ချင်းဆီ လိမ်းစရာမလိုဘဲ brush လေးနဲ့လိမ်းခြင်းဖြင့် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပါးမို့လှလှလေးဖြစ်အောင်အထူးစွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်။ ALL IN ONE အသုံးပြုလို့ရပါတယ် အရောင်ထွက်အားကောင်းပြီး ၊ အရောင်ငြိမ်ပါတယ် ။
-ချွေးစို ရေစို လုံးဝခံပါတယ်
-Panda မျက်ဝန်း လုံးဝ မဖြစ်ပါ ဘူး
-လိုသလိုပုံသွင်းနိုင်အောင် အထူးဖန်တီးထားတဲ့ Eyeliner စုတ်တံလေးက အသုံးပြုတဲ့အခါ လွယ်ကူပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိစေမှာပါ။
-ခြောက်သွေ့မှု မြန်ဆန်ခြင်းက အချိန်ကုန်သက်သာစေသလို မျက်ဝန်းအလှကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မှာပါ။
-မျက်နှာပြင်မှာ ချစ်စဖွယ်အရုပ်လေးတွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်ရေးခြစ်နိုင်သေးတယ်နော်။
-QUAILITY ကတော့ LODON ဆိုတော့ လုံးဝ စိတ်ချရပါတယ် ( ENGLAND GMP ISO လက်မှတ် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ FDA လက်မှတ်လဲ ရထားပါတယ်
Min: 7,000(Ks) Max: 16,500(Ks)
All Kubiss Miss Beauty
All Concealer Eyeliner Eyeshadow Highlights Powder မျက်နှာအလှအပ
All Medium (KB-6119) Dark (6126)
7Seas Winner Trading Co.,Ltd.
95 Myanmar Trading Co.,Ltd
Academy Slim & Detox Machine Distribution
Amorus Fashion Boutique
App Download လုပ်ရန်
Leading With Passion ( Transformational Leadership )
4D, 63/67 3rd Street Lanmadaw Tsp , Ygn
+959 257060001 , +959 257060002
Copyright © 2018 netzay. All rights reserved.